Iinkqubo zokuvelisa iChina zentsimbi ebomvu abenzi kunye nabathengisi | IShencai Pigment
Zimbini iinkqubo eziphambili zokuvelisa i-iron oxide red: eyomileyo neyomileyo. Namhlanje siza kujonga kwezi nkqubo zimbini.
1. Kwinkqubo eyomileyo
Inkqubo eyomileyo yinkqubo yemveliso ebomvu kunye neyintsimbi yemveli e-China. Izibonelelo zayo yinkqubo yemveliso elula, ukuhambahamba kwenkqubo emfutshane kunye notyalo-mali lwezixhobo. Ukungancedi kukuba umgangatho wemveliso uphantsi kancinane, kwaye igesi eyingozi iveliswa ngexesha lenkqubo yokubala, eneempembelelo ezibonakalayo kwindalo esingqongileyo. Njengendlela yokubala yejarosite, inani elikhulu leegesi eziqulathe isalfure ziveliswa ngexesha lenkqubo yokubala.
Kwiminyaka yakutshanje, ngokusekwe kusetyenziso olugcweleyo lweentsimbi eziqulethe inkunkuma, ubuchwephesha benkqubo eyomileyo enje nge-sulphuric acid cinder indlela kunye nentsimbi yentsimbi umgubo wokwenza i-acidification indlela yokosa kwilizwe lethu. Izinto eziluncedo zale nkqubo yinkqubo elula notyalo mali oluncinci, kwaye izinto ezingalunganga kukuba inqanaba lomgangatho wemveliso liphantsi, elinokusetyenziswa kuphela kumacandelo asezantsi, kwaye inani elikhulu leegesi eziyingozi ziveliswa kwinkqubo yemveliso, ethi inefuthe elikhulu kwindalo esingqongileyo.
2. Kwinkqubo emanzi
Inkqubo emanzi kukusebenzisa i-ferrous sulfate okanye i-nitrate ene-ferrous, i-ferric sulfate, i-nitrate ye-ferric njengezinto ezisetyenziswayo, kusetyenziswa ulungiselelo lokuqala lwembewu yekristale, emva koko i-oxidation ukulungiselela indlela yokuvelisa ebomvu yentsimbi ebomvu. Izinto ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo zinokuba zi-ferrous sulfate okanye i-nitrate ene-ferrous, izinto ezomeleleyo, okanye izisombululo ezinamandla eziqukethe i-sulphate ene-ferrous, i-nitrate ene-ferrous, i-ferric sulfate kunye ne-nitrate ye-ferric. I-neutralizer esetyenzisiweyo ingaba yintsimbi yentsimbi, i-iron scrap, i-alkali okanye i-ammonia.
Uncedo lwenkqubo emanzi ilele kumgangatho ogqwesileyo kunye nokusebenza kweemveliso. Iindidi ezahlukeneyo zoluhlu zombala we-oxide oxide unokulungiswa. Ukungancedi kulele kwinkqubo ende, ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu kwinkqubo yokuvelisa, kwaye inani elikhulu legesi yenkunkuma kunye namanzi amdaka e-asidi ayaveliswa. Okwangoku, kukho ukunqongophala kwendlela esebenzayo esebenzayo yokusetyenziswa, enefuthe elikhulu kwindalo esingqongileyo.
Ukushwankathela, kukho iindidi ezininzi zenkqubo ye-iron oxide yemveliso ebomvu, ezi nkqubo zokwenza imveliso kunye nezibonelelo zazo ziyaqhubeka ukukhuthaza uphuhliso lwe-iron oxide pigment, ukuzisa lula kwimveliso yabantu.